नयाँ लुक्समा मेपन्ची, उनलाई देखेर किन झुक्किन्छन् नेपालीहरु ? [फोटोफिचर] - Sagarmatha Online News Portal
एजेन्सी २९ श्रावण २०७८, शुक्रबार
एजेन्सी । नेपाली जस्तै देखिने मेपन्ची । पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा एकदमै भाइरल हट गर्लको रुपमा उनी भाइरल भएकी छन् ।
सामाजिक संजालमा उनको फोटोबाट नयाँ फेक अकाउन्ट बनाएर उनकै फोटोहरु अपलोड गरी नेपाली जस्तै बनाउनेहरुको कमि छैन । उनको सयौं फेक फेसबुक अकाउण्ट, पेज र फेसबुक समूहहरु खोलिएका छन् । तर, ती फेसबुक अकाउण्टहरु उनको होइन । फेसबुकमा उनलाई धेरैले नेपानी नव मोडल भनेर भन्दै विभिन्न फोटोहरु पोष्ट गरेका छन् ।
यो क्रम पछिल्लो समय एकदमै बढ्दै गैरहेको छ । विदेशी कलाकारलाई नेपाली नाम दिई नेपाली कलाकार भन्दै विदेशी कलाकारहरुको फोटोहरु फेसबुकका भित्तामा सजाउने जमात बढ्दै गैरहेको छ ।
पछिल्लो समय विभिन्न समाजिक सञ्जालमा म्यान्मारकी एक मोडेल तथा नायिका भाइरल भएकी छिन् । उनीको विभिन्न तस्वीरहरु हेर्दा नेपाली जस्तै देखिन्छिन् । उनलाई नेपाली कलाकार भन्दै आफ्नो फेसबुक लाइक बढाउनको लागि उनको तस्वीरहरुको प्रयोग हुँदै आइरहेको छ ।
को हुन् मेपन्ची ?
मेपन्चीको वास्तविक नाम भने मे पन्ची सो नायुङ हो । उनको बुवा उ सो नायुङले मेपन्चीको नाम परिवर्तन गर्दै मेपन्चीमात्र राखे जस्तो वास्तविक अर्थ मिस पेन्टर हो ।
युवा अवस्थामा सबैले आफ्नो जीवनको भविष्य बोकेका हुन्छन् । कसैले सपना पूरा गर्छन् त कोही सपना पूरा गर्न चुक्छन् । मेपन्चीको सपना भने कलाकार र पेन्टर बन्नु थियो । त्यसैले उनका बुवाले उनको नाम परिवर्तन गरेका थिए । मेपन्ची पेन्टर पनि हुन् । उनले कमेडि फिल्ममा अभिनय समेत गरेकी छिन् । उनी एक गायिका पनि हुन् ।